Simple Screen Recorder, safidy vaovao hanoratana ny efijery PC | Ubunlog
Simple Screen Recorder, safidy vaovao hanoratana ny efijery PC-nao
Fantatro. Betsaka ny programa hafa mamela antsika hanoratra ny efijery ao amin'ny PC, fa amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny iray vaovao isika. Momba izany Mpanoratra horonantsary tsotra, programa iray izay, araky ny anarany dia rindrambaiko tsotra izay hahafahantsika manoratra ny efijery ao amin'ny solosaintsika. Tamin'ny voalohany, SSR dia noforonina mba handraketana ny vokatra amin'ny sarin'ny programa sy lalao, zavatra iray tratra ary mitazona ny fahatsoran'ny fampiasana azy ary manatsara ny safidy.
Na dia mifanentana amin'ireo rafitra miasa maro hafa toa ny Fedora, CentOS na RHEL aza i Simple Screen Recorder, amin'ity lahatsoratra ity dia hampianarinay anao ny fomba fametrahana azy ao amin'ny rafitra fiasa izay manome ny anarany an'ity bilaogy ity, izany hoe amin'ny Ubuntu sy ny fiasa hafa rafitra miorina amin'ny Debian na amin'ny rafitra fiasa novolavolain'i Canonical, toy ny Linux Mint. Hametraka SSR ao amin'ny Ubuntu izahay ary ny rafitra miasa rehetra mifototra aminy amin'ny fanarahana ireo dingana etsy ambany.
1 Ahoana ny fomba hametrahana Simple Screen Recorder amin'ny Ubuntu
2 Ahoana ny fomba firaketana ny efijery PC anao amin'ny Recorder Screen tsotra
Ahoana ny fomba hametrahana Simple Screen Recorder amin'ny Ubuntu
Mba hametrahana SSR amin'ny Ubuntu na rafitra fiasa mifototra amin'ny rafitra fiasan'ny Canonical, ny hany ataontsika dia ny manokatra terminal ary manorata ireto baiko manaraka ireto:
Avy amin'ny baiko teo aloha, ny voalohany dia hanampy ny fitoeram-bokatra ilaina hametrahana Simple Screen Recorder, ny faharoa kosa dia hanavao ireo fitoeram-bokatra ary ny fahatelo hametraka ilay rindrambaiko.
Ahoana ny fomba firaketana ny efijery PC anao amin'ny Recorder Screen tsotra
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika, lojika dia ny SSR misokatra. Mba hanaovana izany dia tsindrio fotsiny ny bokotra Windows ary ampidiro ny lahatsoratra "Tsotra", izay hiseho ny kisary rindrambaiko. Amin'ny tsiro hafa an'ny Ubuntu, hitady ny Simple Screen Recorder avy amin'ny menio fampiharana izahay. Misafidy ny programa izahay ary hiseho ilay efijery toa ilay hitanao mitarika ity lahatsoratra ity. Ny sisa ataontsika amin'ity teboka ity dia tsindrio "Tohizo". Manaraka izany dia hahita varavarankely toa izao manaraka izao izahay:
Na dia mety tsy toa izany aza, ny firaketana ny efijery amin'ny SSR dia tena intuitive. Afaka mamonjy saika mivantana isika nefa tsy manova soatoavina maro, manao ireto manaraka ireto fotsiny:
Ao amin'ny "Fampidirana horonantsary" dia hisafidy isika raha handraikitra amin'ny efijery feno, toradroa fotsiny, hanaraka ny kursor na, amin'ny fanjakana andrana, Record OpenGL.
Ao amin'ny "Audio Input", dia hisafidy audio izay hangonina izahay. Hamboarinay ity ao amin'ny fizarana "Source".
Tsindrio ny «Tohizo».
Ao amin'ny varavarankely manaraka, eo ambanin'ny "File", manome anarana an'ilay firaketana izahay.
Raha maniry isika dia manisy marika ny boaty "Misaraka amin'ny fizarana", fa aleoko kosa manoratra ny hetsika rehetra araka ny tokony ho izy ary avy eo manitsy izany amin'ny programa hafa.
Ao amin'ny «Container» no isafidianantsika ny endrika tadiavintsika hitahiry azy. Tsara ny MKV, raha mbola tsy mila ambaratonga famoretana isika, amin'izay dia mety tsara raha tehirizina ho MP4 ilay rakitra.
Ao amin'ny fizarana "Video" dia hisafidy codec tianay hampiasaina izahay. Amin'ireo natolotra ahy dia avelako ny safidy default.
Ao amin'ny fizarana "Audio" dia hanao toy ny tamin'ny dingana teo aloha isika, izany hoe, safidio ny codec ary safidio ny taha bit. Aleoko ny MP3 codec dia MPXNUMX mba hialana amin'ny olana mifanentana amin'ny ho avy. Raha zava-dehibe aminao ny audio, azonay atao koa ny mampiakatra ny sandan'ny bitrate ho azy.
Avy eo dia tsindrio ny «Tohizo».
Amin'ny varavarankely manaraka dia azontsika atao ny manamboatra ny fifehezana izay hampiasaintsika hanombohana ny fandraisam-peo. Raha atao default dia "Ctrl + R" no mitambatra.
Raha tsindrio ny "Start recording" dia hanomboka handrakitra ny zava-mitranga rehetra amin'ny solosaina ny programa, ao anatin'izany ny audio anatiny (raha hamboarintsika).
Raha vantany vao vita ny tutorial na ny zavatra tiantsika horaketana dia afaka manindry ny "Pause recording" isika, na eo amin'ny efijery izay niseho tamin'ny dingana faha-10 sy avy amin'ilay kisary lovia izay ho eo amin'ny bara ambony.
Farany, kitika amin'ny «Save recording» izahay. Amin'ny alàlan'ny default, ny horonan-tsary voarakitra dia miseho ao amin'ny fampirimana ataontsika ary hanana ny anarana izay efa namboarinay tamin'ny dingana faha-4 amin'ireo voalaza eto amin'ity lesona ity. Azontsika atao ny manitsy azy io amin'ny programa rehetra ary avy eo mizara izany amin'ny fomba rehetra.
Araka ny hitanao dia tsy mandainga ny teny hoe "Tsotra" amin'ny anaran'ny programa. Tsy toy ny rafitra hafa, toy ilay mamela antsika hanoratra ny efijery amin'ilay mpilalao haino aman-jery VLCNy fandraketana ny efijery amin'ny PC-tsika amin'ny SSR dia mora kokoa amin'ny fotoana iray ihany izay manome antsika safidy mitovy na mihoatra aza noho ny amin'ny programa hafa. Ahoana ny hevitrao momba ny Simple Screen Recorder?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Simple Screen Recorder, safidy vaovao hanoratana ny efijery PC-nao
Sethei dia hoy izy:
Fantatrao ve raha misy mitovy amin'ny Windows? Mampiasa an'ity rindranasa ity ao amin'ny Xubuntu aho any am-piasana fa ao an-trano dia manana Windows hilalao aho ary programa tena mahaliana
Mamaly an'i Sethei
Afaka mahita izany ao amin'ny Ubuntu Software Store ianao izao. Androany hitako toy izao.
Tena tsara ny fampianarana, ilaina ny mamaky azy koa!
Pleomax dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsy mamela ny firaketana feo sy feo amin'ny feo miaraka amin'izay, na farafaharatsiny tsy azoko mihitsy
Valiny amin'i Pleomax
snowyshadows322 dia hoy izy:
Ami miasa ho ahy izy io napetrako ny baiko dia niditra ny rindrambaiko aho ary hitako izany
Valiny tamin'i Snowyshadows322
Cintya dia hoy izy:
Tena manampy ilay fampianarana, misaotra.
Manana ny fanontaniako ihany aho raha mirakitra feo anatiny sy ivelany amin'ny ora iray ...
Valiny tamin'i Cinthya
Tsia, ny audio anatiny na audio ivelany ihany no azonao atao
Oscar Reyes Guerrero dia hoy izy:
Misaotra betsaka, toy ny androany - 2021 - miasa tsara io programa io
Valiny tamin'i Oscar Reyes Guerrero
Ahoana ny fomba fandefasana sary amin'ny Twitter avy amin'ny birao Ubuntu
Ny kinova vaovao an'ny Ubuntu dia hifanaraka amin'ny rafitra Apple AirPrint